Google na Huawei ga-akwụ ndị nwe Nexus 400P ihe ruru dollar 6 | Gam akporosis
Google na Huawei kwenyere ịkwụ ndị nwe Nexus 400P nkwarụ ihe ruru $ 6
Ndị ọrụ nke Google Nexus 6P Mmebi iwu ndị sonyere na ikpe na-aga n'ihu nwere ike ịnweta ego ruru $ 400 ụgwọ dịka Google na Huawei kwenyere na mmezi.
Na-echere nnabata ụlọ ikpe, ụlọ ọrụ ndị ahụ ga-akwụ ụgwọ maka mmezi nke ihe dị ka $ 9.75 nde maka klas omume ikpe malitere na Eprel 2017, n'ihi ọdịda nke ngwaọrụ ahụ gosipụtara, nke ekwughị ma ọ bụ dozie ya dị ka o kwesịrị, na mkpesa siri ike nke ha kpatara.
Dị ka ikpe ahụ si dị, Google, nke butere imepụta na imepụta gam akporo ya na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, gụnyere Huawei, dara iwu nke nkwa ya, ma onye nrụpụta ahụ matara nsogbu ahụ mana ọ zaghị. . Kama, ụlọ ọrụ ndị ahụ gara n'ihu na-ere ngwaọrụ ndị ahụ na-ekwetaghị mmejọ ọ gosipụtara.
Nsogbu a na-atụle na ikpe bụ nke buut loop nke mere ka ekwentị mechien'agbanyeghị ọkwa batrị ya. Ọ bụrụ na ụlọ ikpe kwadoro mmezi ahụ, mgbe ahụ ndị ọrụ US Nexus 6P ndị zụrụ ekwentị na ma ọ bụ mgbe Septemba 25, 2015 ga-eru eru ịkwụ ụgwọ nkwụghachi.
Edebere ikpe ọzọ maka ikpe ahụ na May 9. Dika nkwekọrịta a choro, ndị tozuru oke mkpezi ahụ nwere ike ịnata ihe ruru $ 400 ụgwọ, ebe ndị natara a Pixel XL naanị usoro mmemme mgbanwe ha ga-eto eto maka ego eweghara $ 10.
Nexus 6P na Nexus 5X: ndị a bụ ọdịiche ha
Ndị nwe Nexus 6P ndị nyefere ezigbo akwụkwọ nke okwu ga-enweta ego kachasị edozi, ebe ndị na-enweghị ekwentị nwere ike iru eru maka naanị $ 75 nkwụghachi. N’oge na-adịghị anya, a ga-enye nkọwa ikpeazụ na ihe ndị a chọrọ iji rịọ ego maka nsogbu ndị ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google na Huawei kwenyere ịkwụ ndị nwe Nexus 400P nkwarụ ihe ruru $ 6
Etu esi amata oge ole anyị jiri ekwentị
Hazie gị Galaxy S10 na ndị a na akwụkwọ ahụ aja